FAQs - China Construction Machining Co., Ltd.
Mpitantana fitaovana Hydraulika
Masinina amin'ny lalana
Compact mifangaro vy
Masinina amin'ny lalana hafa
Forklift amin'ny solika
Forklift amin'ny terrain rehetra
Sehatra fanondranana ireo milina fanamboarana sinoa avo lenta
Inona avy ireo tombony azontsika raha ampitahaina amin'ny mpanamboatra hafa?
Valiny haingana -Ny ekipanay dia misy vondron'olona mazoto sy mahay miasa, miasa 24/7 hamaly ny fanontanian'ny mpanjifa sy ny fanontaniana mandrakariva. Ny ankamaroan'ny olan'ny mpanjifa dia voavaha ao anatin'ny 12 ora aorian'ny fametrahan'ny mpanjifa ny fanontaniana
Fanaterana haingana -Mazava ho azy fa maharitra mihoatra ny 30 andro ny mpamokatra / ozinina hafa hamokarana ireo milina voadidy, raha manana loharanom-pahalalana isan-karazany isika, eto an-toerana sy any amin'ny firenena, handraisana milina ara-potoana. Latsaky ny 50% concomitance, afaka manana fandefasana milina mahazatra matetika ho an'ny mpanjifanay izahay
Fepetra fandoavam-bola inona avy no azontsika ekena?
Raha ny mahazatra dia afaka miasa amin'ny fototra T / T na L / C isika
Amin'ny fototra T / T dia takiana mialoha ny fandoavana 30%, ary ny fandanjana 70% dia halamina amin'ny kopian'ny B / L voalohany
Amin'ny alàlan'ny LC. 100% tsy azo ivalozana tsy misy fehintsoratra malefaka azo ekena. Mangataha torohevitra amin'ny tompon'andraikitra amin'ny varotra tsirairay izay iarahanao miasa
Iza amin'ireo teny incotermy 2010 azontsika iasaina?
Ny CNCMC, ilay mpilalao iraisam-pirenena be pitsiny, dia afaka miatrika ny teny varotra rehetra toy izao
1. EXW - EX Work
2. FOB- Maimaimpoana amin'ny sambo
3. CIF - Fiantohana sy fandefasana entana
4. DAF- Navoaka tao amin'ny Frontier
5. DDU - Adidy natolotra tsy voaloa
6. DDP- Nomena adidy voaloa
Mandra-pahoviana no hitombina ny vidiny?
Mpamatsy malala sy sariaka izahay, tsy mitsiriritra velively amin'ny tombotsoan'ny windfall. Amin'ny ankapobeny, ny vidintsika dia mijanona ho marin-toetra mandritra ny taona. Miorina amin'ny toe-javatra roa ihany ny vidinay
1. Ny tahan'ny USD: Ny RMB dia miovaova arakaraka ny tahan'ny fifanakalozam-bola iraisam-pirenena
2. Nanamboatra ny vidin'ny milina ireo mpanamboatra / orinasa, noho ny fiakaran'ny vidin'ny asa sy ny vidin'ny akora
Inona no fomba ahafahana miasa amin'ny fandefasana entana?
Afaka mandefa milina fanamboarana amin'ny alàlan'ny fitaovana fitaterana isan-karazany isika
1. Ho an'ny 90% amin'ny fandefasana azy dia handeha an-dranomasina izahay, mankany amin'ny kaontinanta lehibe rehetra toa an'i Amerika atsimo, afovoany afovoany, afrika, oseania, ary eoropa sns, na amin'ny alàlan'ny kaontenera na RORO / sambo marobe
2. Ho an'ireo firenena manodidina an'i Chine, toa an'i Russia, Mongolia, Kazakhstan, Uzbekistan sns, afaka mandefa milina fanamboarana amin'ny arabe na lalamby izahay
3. Ho an'ny kojakoja maivana amin'ny fangatahana maika, azontsika alefa amin'ny alàlan'ny serivisy mpandefa iraka iraisam-pirenena, toy ny DHL, TNT, UPS, na FedEx